कन्सर्ट्टा बनाम रितालिन: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ - औषधि बनाम मित्र | सेप्टेम्बर 2021
घरपालुवा जनावर खेलहरु कम्पनी स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य औषधि जानकारी, समाचार स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर औषधि बनाम मित्र कल्याण कम्पनी, औषधि जानकारी औषधि जानकारी स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण कम्पनी, समाचार समुदाय, कम्पनी समाचार, कल्याण
मुख्य >> औषधि बनाम मित्र >> कन्सर्ट्टा बनाम रितालिन: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ
कन्सर्ट्टा बनाम रितालिन: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ
यदि तपाईं वा तपाईंको बच्चाको एडीएचडी पत्ता लागेको छ भने, तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले एडीएचडी औषधि प्रयोग गर्ने विस्तृत मानसिक स्वास्थ्य उपचार योजनाको भागको रूपमा उल्लेख गर्न सक्दछ, सामाजिक, व्यवहार र शैक्षिक स्रोत सहित। एडीएचडी सामान्य छ : संयुक्त राज्य अमेरिकामा to देखि १ age वर्ष उमेरका 6..4 मिलियन बच्चाहरूलाई एडीएचडी पत्ता लागेको छ, र%% वयस्कहरूलाई एडीएचडी भएको छ।
कन्सर्ट्टा र रतालिन दुई उत्तेजक एडीएचडी औषधिहरू संयुक्त राज्य खाद्य र औषधि प्रशासन (एफडीए) द्वारा अनुमोदित छन्। दुबै प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स एडीएचडी (ध्यान घाटा hyperactivity अस्वस्थता) उपचार को लागी संकेत गरीएको छ। दुबै औषधीहरूले एउटै घटक, मेथिलफेनिडेट समावेश गर्दछ। कन्सर्टमा मेथिलफेनिडेटको लामो-अभिनय फार्म समावेश गर्दछ, जबकि रीतालिनले मेथिलफेनिडेटको तत्काल रिलीज फारम समावेश गर्दछ। कन्सर्ट्टा र रीतालिनले मस्तिष्कमा डोपामाइन र नोरपाइनफ्रिनको स्तर बढाउन CNS (केन्द्रीय स्नायु प्रणाली) मा अभिनय गरेर काम गर्दछ, जसले एकाग्रता र सतर्कता जस्ता ADHD लक्षण सुधार गर्न मद्दत गर्दछ।
दुबै औषधि वर्गीकृत गरिएको छ तालिका दोस्रो औषधि ड्रग एन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (डीईए) द्वारा, मतलब कि त्यहाँ लागूपदार्थको दुर्व्यसन र निर्भरता को लागी एक उच्च संभावना छ।
यद्यपि कन्सर्ट्टा र रिटालिन दुबै उत्तेजकहरू हुन् जसले मेथिलफेनिडेट समावेश गर्दछन्, तिनीहरूमा केही भिन्नताहरू छन्। कन्सर्ट्टा र रिटेलिनको बारेमा थप जान्नको लागि तल पढ्न जारी राख्नुहोस्।
कन्सर्ट्टा र Ritalin बीच मुख्य भिन्नता के हो?
कन्सर्ट्टा र Ritalin दुबै उत्तेजक औषधि को रूप मा वर्गीकृत गरीएको छ र दुबै ब्रान्ड नाम र जेनेरिक फार्ममा उपलब्ध छन्। कन्सर्ट्टाको जेनेरिक नाम मेथिलफिनिडेट (विस्तारित रिलीज) हो। कन्सर्ट्टा लगभग १२ घण्टाको लागि डिजाइन गरिएको हो, र यो प्रति दिन एक पटक गरिन्छ।
Ritalin को जेनेरिक नाम methylphenidate हो र एक तत्काल रिलीज ट्याब्लेट हो। Ritalin को एक खुराक चार घण्टा लामो हुन्छ, त्यसैले यो अधिक अक्सर गरिन्छ, सामान्यतया दिनको दुईदेखि तीन पटक।
Ritalin का अन्य रूपहरू अब अभिनय गर्दै छन्। Ritalin-LA एक लामो-अभिनय क्याप्सूल (ब्रान्ड र जेनेरिकमा उपलब्ध) र Ritalin-SR (जेनेरिकमा उपलब्ध) एक लामो-अभिनय ट्याब्लेट हो। Ritalin LA एक द्वि-मोडल रिलीज छ। आधा मेथिलफेनिडेट तुरुन्त जारी हुन्छ, र दोस्रो आधा पछि जारी हुन्छ। Ritalin LA को एक खुराक को लागी आठ देखि 10 घण्टा सम्म रहन्छ। Ritalin-SR को एक खुराक लगभग आठ घण्टा सम्म रहन्छ।
कन्सर्टा वा Ritalin को साथ उपचार को लम्बाई फरक छ। केही बिरामीहरूले लिन्छaलागूपदार्थ छुट्टी , जहाँ औषधि अस्थायी रूपमा रोकिन्छ, उदाहरणका लागि, गर्मी बिदाको बेला जब स्कूलको सत्र हुँदैन। तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले तपाईंलाई वा तपाईंको बच्चाले औषधि छुट्टी लिनु पर्छ कि हुँदैन भनेर निर्णय गर्न सहयोग गर्न सक्छ।
कसरी एक ह्या hang्गओभर टाउको दुखाई बाट छुटकारा पाउन
कन्सर्ट्टा र Ritalin बीच मुख्य भिन्नता
जेनेरिक नाम के हो? मेथिलफेनिडेट हाइड्रोक्लोराइड विस्तारित रिलीज मेथिलफेनिडेट हाइड्रोक्लोराइड
कुन फार्म (हरू) ड्रग भित्र आउँछ? विस्तारित-रिलिज ट्याब्लेट ट्याब्लेट, विस्तारित-रिलीज क्याप्सूल (Ritalin LA), विस्तारित रिलीज ट्याब्लेट (Ritalin-SR)
मानक खुराक के हो? १,,, 36,, 54, वा mg२ मिलीग्राम दैनिक बिहान एक पटक (खुराक उमेर, तौल, र उपचारको प्रतिक्रियामा निर्भर गर्दछ) बच्चाहरु:
Mg मिलीग्राम दैनिक दुई पटक सुरु गर्न, खुराक बिस्तारै वृद्धि हुन सक्छ वयस्कहरू:
औसत दैनिक खुराक २० देखि mg० मिलीग्राम विभाजित खुराकमा २ देखि times पटक दैनिक गर्दछ (उदाहरण: १० मिलीग्राम दिनको3पटक दिनको total० मिलीग्राम कुल दैनिक खुराक बराबर)
विशिष्ट उपचार कति लामो हुन्छ? फरक: विस्तृत अवधिको लागि आवश्यक हुन सक्छ तर weeks हप्ता भन्दा बढी अध्ययन गरिएको छैन; स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस् फरक: विस्तारित अवधिको लागि आवश्यक हुन सक्छ; स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्
कसले औषधी प्रयोग गर्दछ? उमेर to देखि। 65 वयस्कमा उमेर years बर्ष
Ritalin मा सबै भन्दा राम्रो मूल्य चाहनुहुन्छ?
Ritalin मूल्य सचेतका लागि साइन अप गर्नुहोस् र जब मूल्य परिवर्तन हुन्छ फेला पार्नुहोस्!
सर्तहरू कन्सर्टा र Ritalin द्वारा उपचार
कन्सर्ट्टा र Ritalin दुबै6बर्ष र माथिका बच्चाहरुमा एडीएचडी उपचार को लागी संकेत गरीएको छ, किशोरावस्था , र वयस्कहरू । Ritalin पनि माइनकोलेप्सीका लागि संकेत गरीएको छ। कन्सर्ट्टा वा Ritalin एक व्यापक उपचार योजना को एक हिस्साको रूपमा प्रयोग गरिनु पर्छ जसमा उपचार र शैक्षिक हस्तक्षेप समावेश हुन सक्छ।
सर्त कन्सर्ट Ritalin
ध्यान डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसअर्डर (ADHD)6बर्ष र माथिका बच्चाहरू, किशोर र वयस्क 65 65 बर्षमा हो हो (Ritalin निर्माता जानकारी अधिकतम उमेर निर्दिष्ट गर्दैन)
के कन्सर्ट्टा वा Ritalin अधिक प्रभावी छ?
त्यहाँ कुनै अध्ययनहरू छैनन् जुन कन्सर्ट्टा र तुरुन्त रिलीज रितालिन तुलना गर्दछ। कन्सर्टटाका लागि क्लिनिकल परीक्षणहरू कन्सर्टा, रिटेलिन, वा प्लेसबो लिने बिरामीहरूको अध्ययन गरे। यद्यपि परिणामहरूले कन्सर्ट्टालाई प्लेसबोसँग तुलना गरे र रितालिन समावेश गर्दैन। परिणामले देखाए कि कन्सर्ट्टा प्लेसबोभन्दा उच्च थियो, तर रितालिनको सम्बन्धमा परिणामहरू देखाएनन्।
कन्सर्ट्टालाई रितालिनसँग तुलना गर्दा, याद गर्नुहोस् कि दुबै औषधिहरूले मेथिल्फेनिडेट समावेश गर्दछ, त्यसैले हामी उहि ड्रगलाई हेरिरहेका छौं। भिन्नता ड्रग्स गर्ने तरिकामा छ र ती कति लामो समय सम्म टिके। कन्सर्ट्टा लगभग १२ घण्टा लामो हुन्छ र दैनिक बिहान एक पटक डोज गरिन्छ, त्यसैले यो धेरै राम्रो विकल्प हुन सक्दछ जसले धेरै घण्टा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेछ र औषधीको थप डोज लिन नपरोस्। लगभग चार घण्टासम्म काम गर्ने रिटालिन राम्रो विकल्प हुनसक्दछ, जसलाई केवल केही घण्टा औषधी कभरेजको आवश्यक पर्दछ वा जसले आवश्यक परेको खण्डमा थप डोज लिन मन नपराउनेको लागि हुन्छ।
कसरी फ्लू टाढा जान्छ
तपाईको लागि सब भन्दा प्रभावकारी औषधि तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले निर्धारण गर्नु पर्छ जसले तपाईको मेडिकल अवस्थाका साथसाथ तपाईको मेडिकल ईतिहास र अन्य औषधिहरू जुन Concerta वा Ritalin सँग अन्तर्क्रिया लिन सक्दछ। चिकित्सा सल्लाहका लागि तपाईको प्रिस्क्रिबरलाई परामर्श दिनुहोस्
Concerta मा सबै भन्दा राम्रो मूल्य चाहनुहुन्छ?
Concerta मूल्य अलर्ट को लागी साइन अप गर्नुहोस् र जब मूल्य परिवर्तन हुन्छ फेला पार्नुहोस्!
कभरेज र कन्टेर्टा बनाम रितालिनको लागत तुलना
कन्सर्टा सामान्यतया मेडिकेयर भाग डी द्वारा कभर गरिएको छैन यो बीमाले ढाक्न सक्छ, सामान्यतया यसको सामान्य ढाँचामा। Con० कन्सर्टा mg mg मिलीग्राम जेनेरिक ट्याब्लेटको लागि $ 300 भन्दा बढि पकेटको जेब लागत। एक सिंगलकेयर कुपनले यस लागतलाई १ well० भन्दा कममा कम गर्न सक्छ।
Ritalin सामान्यतया मेडिकेयर भाग डी द्वारा कभर गरिएको छ र बीमा द्वारा कभर हुन सक्छ, सामान्यतया जेनेरिक रूपमा। R० Ritalin १० मिलीग्राम जेनेरिक टेबलेट को लागत को about 85 को बारे मा छ। यो लागत सहभागी फार्मेसीहरूमा एकलकेयर कूपनको साथ $ २ than भन्दा कममा कम गर्न सकिन्छ।
सामान्यतया बीमा द्वारा कभर? फरक हुन्छ फरक हुन्छ
सामान्यतया चिकित्सा द्वारा कभर? हैन हो
मानक खुराक ,०, mg 36 मिलीग्राम ट्याब्लेटहरू ,०, १० मिलीग्राम ट्याब्लेटहरू
विशिष्ट मेडिकेयर कोपे0२0० $ - $ .$
एकलकेयर लागत $ १-०- $ १ .० $ २-- $।
कन्सर्ट्टा बनाम रतालिनको साझा साइड इफेक्टहरू
कन्सर्टाको सबैभन्दा सामान्य साइड इफेक्टहरू पेटको पेट दुख्ने, भूख घटाउने, तौल घटाउने, टाउको दुख्ने, सुख्खा मुख, मतली, अनिद्रा / निद्रा समस्या, चिन्ता, चक्कर आउने, चिढचिढोपन, र हाइपरहाइड्रोसिस (पसिना बढेको) हो। Ritalin सँग समान साइड इफेक्टहरू छन्, तर फ्रिक्वेन्सी प्रतिशत सूचीबद्ध छैन। यो साइड इफेक्ट को पूर्ण सूची छैन। गम्भीर दुष्प्रभाव हुन सक्छ। कन्सर्टा वा Ritalin संग हुन सक्छ प्रतिकूल प्रभाव को एक पूर्ण सूची को लागी तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संग परामर्श गर्नुहोस्।
माथिल्लो पेट दुख्ने हो .2.२% हो रिपोर्ट गरिएको छैन *
भूख / वजन घटाउने हो ≥≥% हो रिपोर्ट गरिएको छैन
टाउको दुखाई हो ≥≥% हो रिपोर्ट गरिएको छैन
सुख्खा मुख हो ≥≥% हो रिपोर्ट गरिएको छैन
मतली हो ≥≥% हो रिपोर्ट गरिएको छैन
चिडचिलोपन हो ≥≥% हो रिपोर्ट गरिएको छैन
चिन्ता हो ≥≥% हो रिपोर्ट गरिएको छैन
अत्यधिक पसिना आउँछ हो ≥≥% हो रिपोर्ट गरिएको छैन
बान्ता हो २.8% हो रिपोर्ट गरिएको छैन
ज्वरो हो २.२% हो रिपोर्ट गरिएको छैन
माथिल्लो श्वासप्रणाली संक्रमण हो २.8% हो रिपोर्ट गरिएको छैन
चक्कर हो १.9% हो रिपोर्ट गरिएको छैन
अनिद्रा हो २.8% हो रिपोर्ट गरिएको छैन
खोकी हो १.9% हो रिपोर्ट गरिएको छैन
* प्रतिशत रिटेलिनको साथ रिपोर्ट गरिएको छैन
स्रोत: डेलीमेड ( कन्सर्ट ), डेलीमेड ( Ritalin )
कन्सर्ट्टा बनाम Ritalin को ड्रग अन्तर्क्रिया
कन्सर्ट्टा वा Ritalin MAOIs (monoamine oxidase अवरोधकर्ता) संग लिनु हुँदैन किनभने संयोजन एक हाइपरटेंसिभ (उच्च रक्तचाप) संकट पैदा गर्न सक्छ। कन्सर्ट्टा वा Ritalin कम्तिमा 14 दिन को एक MAOI द्वारा अलग गर्नुपर्छ। कन्सर्ट्टा वा रिटेलिन रक्तवाहक एजेन्टहरू (रक्तचाप बढाउन प्रयोग गरिने औषधीहरू) को साथ सावधानीका साथ प्रयोग गर्नुपर्दछ किनकि रक्तचापमा बृद्धि हुने सम्भावनाको कारण। कन्सर्ट्टा वा रिटेलिनले वारफेरिन, केही एन्टिकोनभल्सेन्ट्स, र ट्राइसाइक्लिक वा एसएसआरआई एन्टिप्रेसप्रेसन्टहरूको स्तर बढाउन सक्छ। एक खुराक समायोजन आवश्यक हुन सक्छ यदि कन्सर्टा वा Ritalin साथ लिएको छ। कन्सर्ट्टा वा रिटेलिनले डायरेटिक्स वा रक्तचाप औषधिहरूको प्रभावकारिता कम गर्न सक्दछ। यो औषधी अन्तरक्रियाको पूर्ण सूची होइन। औषधि अन्तर्क्रियाको पूर्ण सूचीको लागि तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्।
औषधि ड्रग क्लास कन्सर्ट Ritalin
Tranylcypromine MAOI हो हो
Phenylephrine भासोप्रेसर एजेन्टहरू हो हो
प्रिमिडोन एन्टिकोनभल्सेन्ट्स हो हो
हाइड्रोक्लोरोथियासाइड डायरेटिक्स हो हो
ओल्मेसारन Antihypertensives हो हो
कन्सर्ट्टा र Ritalin को चेतावनी
तपाईं जहिले पनि कन्सर्टा वा Ritalin को लागि एक प्रिस्क्रिप्शन भर्नुहुन्छ तपाईंले एक औषधी गाइड प्राप्त गर्नुहुनेछ, जसमा चेतावनी र साइड इफेक्टको बारेमा जानकारी समावेश गर्दछ। कन्सर्ट्टा र Ritalin दुबै एक छ बक्से चेतावनी जुन एफडीएलाई आवश्यक पर्ने सबैभन्दा कडा चेतावनी हो। दुरुपयोग वा निर्भरताको जोखिमको कारण, बिरामीहरूलाई कन्सर्टा वा Ritalin निर्धारित गर्नु अघि दुरुपयोगको जोखिमको लागि मूल्या be्कन गर्नुपर्छ। Concerta वा Ritalin लिने बिरामीहरूलाई उपचारको क्रममा दुरुपयोगको संकेतहरूको लागि अनुगमन गरिनु पर्छ।
सामान्य खुराकमा समेत उत्तेजक औषधोपचारको साथ अचानक मृत्यु रिपोर्ट गरिएको छ। यो बच्चाहरू / किशोरावस्थामा केहि निश्चित हृदय विकृतिहरू वा समस्याहरूको साथ भएको छ। वयस्कहरूमा अचानक मृत्यु, स्ट्रोक, र हृदयघातको रिपोर्ट गरिएको छ। यी घटनाहरू वयस्कहरूमा हृदय विकृति वा अन्य हृदय समस्याहरूको साथ हुने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसकारण, कन्सर्ट्टा वा रिटेलिन जस्ता उत्तेजकहरू बच्चाहरू, किशोर-किशोरीहरू, वा मुटुको समस्या वा विकृति भएका वयस्कहरूमा प्रयोग गर्नु हुँदैन।
रक्तचाप र / वा मुटुको दर बढ्न सक्छ; बिरामीहरूलाई अनुगमन गरिनु पर्छ। रक्तचाप वा मुटुको समस्या भएका बिरामीहरूलाई सावधानीपूर्वक उपचार गर्नुपर्दछ।
अतिसंवेदनशीलता विरलै छ तर हुन सक्छ। यदि तपाईंलाई सास फेर्न समस्या भएको छ, वा अनुहार, घाँटी, जिब्रो वा घाँटीमा सूजन छ भने कन्सर्टा वा रिटेलिन लिन रोक्नुहोस् र आपतकालीन उपचार खोज्नुहोस्।
उत्तेजकहरूले बिरामी विकार जस्ता प्रीफिसि a्ट मनोवैज्ञानिक डिसअर्डर भएका बिरामीहरूमा व्यवहार अस्थिरता र चिन्तन डिसअर्डरको लक्षणहरू बढाउन सक्दछन्। उत्तेजक सुरु गर्नु अघि बिरामीहरूको स्क्रीनिंग गरिनु पर्छ।
एडीएचडी उपचार सुरू गर्ने बिरामीहरूलाई आक्रामक व्यवहार वा वैमनस्यताको उपस्थिति वा बिग्रँदो लागि अनुगमन गरिनु पर्छ।
उत्तेजकहरूले दौराको अघिल्लो इतिहासको साथ बिरामीहरूमा दौराको थ्रेसहोल्ड कम गर्न सक्छ। यदि दौरा हुन्छ भने, औषधि बन्द गर्नुपर्दछ।
प्रियापिज्म (लामो, पीडादायी इरेक्शन) देखा पर्‍यो। यदि यो हुन्छ भने, तत्काल मेडिकल उपचार खोज्नुहोस्।
कन्सर्ट्टा वा रिटेलिनमा बिरामीहरूलाई राइनाडको घटनालगायत परिधीय भास्कुलोपथीका लागि अवलोकन गर्नुपर्दछ।
उत्तेजक उपचारको क्रममा बालबालिकाको बृद्धि निगरानी गरिनु पर्छ। बच्चाहरू जो हप्ताको सात दिन पूरै वर्ष औषधी दिइन्छ उनीहरूको विकास दरमा अस्थायी ढिलो हुन सक्छ।
धमिलो दर्शन हुन सक्छ। तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस् यदि यो भयो भने।
सीबीसी, भिन्नता, र प्लेटलेट गणना आवधिक रूपमा अनुगमन गरिनु पर्छ।
कन्सर्टा ट्याब्लेटको आकारको कारण, केहि GI (जठरांत्र) समस्या भएका बिरामीहरूले कन्सर्टा लिनु हुँदैन। यो किनभने ट्याब्लेट GI पथमा आकार परिवर्तन गर्दैन र अवरोध पैदा गर्न सक्छ।
कन्सर्ट्टा ट्याब्लेट पूरै निल्नु पर्छ र चाउनु हुँदैन, विभाजित गर्नुपर्दछ, वा कुचुराउनु हुँदैन। ट्याब्लेटको (निष्क्रिय) शल स्टूलमा देखा पर्न सक्छ।
Ritalin-SR ट्याब्लेटहरू पूरै निल्छ र कुचल वा चबाउन सकिदैन।
Ritalin LA क्याप्सूल पूरै निल्नु पर्छ, र कुचुर, चबाउन वा विभाजित गर्नु हुँदैन। वा, तपाईं एक Ritalin एलए क्याप्सूल खोल्न र मोती को एक चम्मच स्याउ मा छर्कनु पर्छ र तुरुन्तै उपभोग गर्न सक्नुहुन्छ। भविष्यको प्रयोगको लागि मिश्रण भण्डार नगर्नुहोस्।
कन्सर्ट्टा बनाम रितालिनको बारेमा प्राय: सोधिने प्रश्नहरू
कन्सर्ट भनेको के हो?
कन्सर्ट्टा एक उत्तेजक हो जुन एडीएचडीको उपचारको लागि प्रयोग गरिन्छ। यसले मेथिलफिनिडेटको लामो-अभिनय रूप समावेश गर्दछ र दिनमा एक पटक लिन्छ।
Ritalin के हो?
Ritalin एक उत्तेजक हो जसमा methlphenidate हुन्छ र ADHD वा narcolepsy को उपचार गर्न प्रयोग गरीन्छ। यो दैनिक रूपमा दुई वा तीन पटक लिन्छ किनभने यो छोटो अभिनय हो। Ritalin को अब-अभिनय फार्महरू पनि उपलब्ध छन्।
acetaminophen tylenol जस्तै छ?
के कन्सर्टा र Ritalin समान छ?
कन्सर्ट्टा र रिटेलिन दुबैमा एक समान सक्रिय संघटक, मेथिलफिनिडेट। जे होस्, कन्सर्ट्टा लगभग १२ घण्टाको लागि डिजाइन गरिएको हो, त्यसैले यो बिहान प्रति दिन एक पटक गरिन्छ। Ritalin, यसको तत्काल रिलीज फारम मा, दैनिक वा दुई वा तीन पटक dosed छ किनभने यो छोटो अभिनय हो।
तपाईंले सुन्नु भएको उस्तै उत्तेजक औषधिहरूका केहि उदाहरणहरू Vyvanse , Quillivant XR, र Adderall (एम्फेटामिन लवण), अन्यहरू बीच।
के कन्सर्ट्टा वा Ritalin राम्रो छ?
त्यहाँ कन्सर्ट्टा र Ritalin सीधा तुलना कुनै अध्ययन छैन। किनभने दुबै औषधीले मेथिलफेनिडेट समावेश गर्दछ, कुन औषधि प्रयोग गर्ने छनौट विभिन्न कारकहरूमा निर्भर हुन्छ, जस्तै कुन औषधि तपाईंको तालिकाको लागि उपयुक्त छ, कुन औषधि तपाईंको जीवनशैलीको लागि अधिक सुविधाजनक हुनेछ, र उपचारप्रति तपाईंको प्रतिक्रिया। तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायक तपाईं Concerta वा Ritalin को लागी एक उपयुक्त औषधि हो कि भनेर निर्णय गर्न मद्दत गर्न सक्छ।
के म गर्भवती हुँदा कन्सर्टा वा रिटेलिन प्रयोग गर्न सक्छु?
कन्सर्ट्टा र रितालिन गर्भावस्थामा कोटि सी हुन्, मानव गर्भावस्थामा औषधीको अध्ययन हुँदैन भनेर जनाउँदछ, तर पशु अध्ययनले भ्रुणको खतरा रहेको देखाएको छ। सामान्यतया, कन्सर्ट्टा वा Ritalin गर्भावस्थामा प्रयोग गरिदैन। यदि तपाईं कन्सर्टा वा Ritalin लिनुभयो र तपाईं गर्भवती हुनुहुन्छ भनेर फेला पार्नुभयो भने, तुरुन्तै तपाईंको प्रिस्क्रिटरलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
के म कन्सर्टा वा रितलिनलाई रक्सीको साथ प्रयोग गर्न सक्छु?
यदि तपाईं कन्सर्टा वा Ritalin जस्तै एक उत्तेजक ले, तपाईं पर्छ मदिराबाट बच्नुहोस् । जबकि उत्तेजक ठूलो हो, रक्सी एक डाउनर हो। तिनीहरू एक अर्काको बिरूद्ध काम गर्छन्, र तपाईंलाई कम नशा लाग्न सक्छ, तपाईंलाई अधिक पिउन दिनुहुन्छ जसले दुर्घटना वा मदिराको विषाक्तता निम्त्याउन सक्छ (जसले अनियमित मुटुको धडकन, सास फेर्न ग्लानी, मतली, बान्ता, र / वा दौडन सक्छ)।
Ritalin एक गति छ?
गति मेथाम्फेटमाइन हो। कुल मिलाएर, अर्को एडीएचडी औषधि, एम्फीटामाइन साल्ट (एम्फैटामिन र डेक्स्ट्रोमफेटामाइन) समावेश गर्दछ, जुन रासायनिक रूपले मेटाफेटमाइनसँग सम्बन्धित छ। वेग, वा mehamphetamine, Adderall भन्दा अधिक लत छ। यो अधिक विषाक्त पनि छ र दिमागमा क्षति, मुटुको क्षति, दाँत क्षय, र अन्य समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ। उल्लेख गर्न मिल्दैन, मेथाम्फेटामाइन सामान्यतया सडकमा प्राप्त हुन्छन्, जुन जोखिमपूर्ण हुन्छ।
Ritalin methylphenidate समावेश गर्दछ। Adderall जस्तै, Ritalin एक उत्तेजक हो र रासायनिक amphetamines जस्तै छ। एक तालिका दोस्रो औषधिको रूपमा, Ritalin दुरुपयोग र निर्भरता को एक उच्च संभावना छ। यदि तपाइँ वा तपाइँको बच्चा Ritalin (वा कुनै ADHD औषधि) लिनुहुन्छ, तपाइँ तपाइँको prescriber द्वारा नजिकबाट निगरानी गर्नुपर्छ।
कन्सर्टले मलाई कस्तो महसुस गराउनेछ?
कन्सर्टले ADHD को लक्षण सुधार गर्न मद्दत गर्नुपर्दछ। यसले केही खुराक समायोजन लिन सक्दछ जब सम्म तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले तपाईंको लागि सही डोज फेला पार्दैन। कन्सर्टका केही सामान्य साइड इफेक्टहरू पेटको पेट दुख्ने, भोक कम गर्ने, वजन घटाउने, टाउको दुख्ने, सुख्खा मुख, मतली, निन्द्रा समस्या, चिन्ता, चक्कर आउने, चिढचिढो हुनु र पसिना बढाउने कामहरू हुन्। यदि तपाईंसँग कुनै साइड इफेक्टहरू छन् जुन गम्भीर वा समस्याग्रस्त छन् (जस्तै दाला वा सास फेर्न समस्या), तपाईंको स्वास्थ्य प्रदायकलाई तुरून्त सूचित गर्नुहोस्।
के कन्सर्टाले तपाईंको व्यक्तित्व परिवर्तन गर्दछ?
एडीएचडी औषधि तपाईंको (वा तपाईंको बच्चाको) व्यक्तित्व परिवर्तन हुँदैन। व्यक्तित्वमा कुनै पनि असामान्य परिवर्तन खुराकको धेरै अधिक लिईको परिणाम हुन सक्छ। यदि तपाई व्यक्तित्व परिवर्तन देख्नुहुन्छ भने, डोज कम गर्ने वा औषधि परिवर्तन गर्ने बारे तपाईको प्रिस्क्रिटरलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
लिरिका के हो र यो केको लागि प्रयोग गरिन्छ?
चिन्ता र डिप्रेसनको उपचार गर्ने औषधीहरू
स्वास्थ्य बीमा बिना एंटीबायोटिक्स को औसत लागत
सबैभन्दा प्रभावकारी जन्म नियन्त्रण गोली के हो?
ibuprofen को उच्चतम खुराक के तपाइँ लिन सक्नुहुन्छ
फ्लू गर्मी मा टाढा किन जान्छ?
तपाइँ दुबै एसिटामिनोफेन र ibuprofen लिन सक्नुहुन्छ
चरण ३ मिर्गौला रोग उल्टाउन सक्छ